Gịnị bụ oke mmiri ozuzo kachasị njọ n'akụkọ ihe mere eme? | Netwọk Mgbasa Ozi
na dọkịta Ha bụ ihe kachasịsịsịsị ike na ike ihu igwe nwere ike ịmalite na mbara ụwa. Planetwa nke, nke a hụrụ site na mbara igwe, ga-enye anyị mmetụta na ọ dị jụụ, mana eziokwu bụ na ọ bụghị otu a; ma ọ dịghị ihe ọzọ, ọ bụghị n'ógbè ụfọdụ dị ka United States. Ihe akaebe nke a anyị nwere ndekọ ndị fọdụrụ na ajọ ikuku ndị a, nke nwere ike ibute mbibi dị ukwuu, yana ọnwụ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata kedu oke oke ifufe kachasị njọ n'akụkọ ihe mere eme, Echefula isiokwu a.
North America, na ọkachasị United States, nwere akụkọ ihe mere eme dị ezigbo mkpa banyere oke ebili mmiri na-ebibi ihe, ọkachasị n’obodo ndị dị ka Mississipi, Oklahoma ma ọ bụ Moore. Lee ụfọdụ n'ime ha:
Tornado regina: n’afọ 1912, oke mmiri ozuzo metụtara obodo Saskatchewan, Canada. O teghị aka nkeji atọ, mana o gburu mmadụ iri atọ ma bibie ọtụtụ puku ụlọ.
Tri-State tonado: Ka ọnwa nke iri na asatọ n’ọnwa Mach, n’afọ 18, bụ ebili mmiri EF1925 dị na Missouri (USA). Ọ gafere Missouri, n’ebe ndịda Illinois wee pụọ na Indiana, gbuo mmadụ 5.
Talladega TornadoNa 1932, Talladega County (Alabama) guzobere ụdị 4 nke oke mmiri ma bibie ógbè ahụ, gbuo mmadụ XNUMX.
Oklahoma oké ifufe: Mee 3, 1999 bụ ụbọchị ọdachi maka Oklahoma. Onu ogugu oke mmiri nke iri asaa na isii ruru ụbọchị ahụ, otu n’ime ha bụ EF76, nke ga-ekewa obodo abụọ wee gbuo mmadụ 5.
Okpokoro Joplin: na Mee 22, 2011, o bibiri 20% nke obodo Joplin (USA) wee hapụ otu narị na iri isii nwụrụ na mgbakwunye mmebi ọtụtụ ihe. Ọ bụ otu n'ime mbibi kachasị njọ na akụkọ ntolite United States na nso nso a.
Tornadoes nwere ike ibibi ihe, mana enwere ụfọdụ ndị dọtara ha nke ukwuu nke na ha chọrọ ịbịaru nso dị ka o kwere mee iji mụọ ha nke ọma: ha bụ oké ifufe (ma obu ichu nta).
Onwe m, achọrọ m isonyere gị, ọbụlagodi na ọ bụ naanị otu ugboro na ndụ. Mana hey, n'oge ọ bụ nrọ iji mezuo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Gịnị bụ oke mmiri ozuzo kachasị njọ n'akụkọ ihe mere eme?
Kedu otu mbufịt si eme